Google I / O 2016 dia misy Session Vaovao maro | Androidsis
Nampiana session vaovao amin'ny Google I / O 2016
Amin'ity herinandro ity isika dia manana Google I / O 2016 ary tena saika mistery ny zavatra azontsika jerena amin'ireo andrana fihaonambe ho an'ireo mpamorona izay ny hevi-dehibe ho zava-dehibe indrindra amin'ny taona. Google I / O izay nanolorany ny Android 6.0 Marshmallow tamin'ny herintaona ary somary fanamavoana io fanendrena vaovao io rehefa mahafantatra fa hanana Android N amin'ny endriny farany amin'ny fahavaratra isika.
Google dia nanisy fivoriana vaovao ho an'ireo andro Google I / O 2016 izay mety hanondro ampahany amin'ny fisongadinana Avy amin'ny teny ifotony misy ny fiarovana, takelaka azo atao miaraka amin'ny Project Tango sy Android Pay, dia toa handray ny fifandraisany lehibe izy ireo. Toy ny mahazatra dia mamela zavatra ao amin'ny mistery isika ka ny zazalahy Mountain View dia gaga antsika amin'ny vaovao izay mandray ny ampaham-baovao tamin'izany andro izany.
Amin'ireto fivoriana vaovao ireto dia afaka manatrika izany ny mpamorona apetraho amin'ny Android Pay ny fifantohana, Fampiharana Google, ekipa misy varavarankely Android, bateria ary fotoana maharitra. Google Cast sy Android TV dia hanana ny toerany sy ny toerany hanana traikefa mifandray ao an-trano ihany koa.
Mikasika ireo zava-baovao dia misy ny mifantoka amin'ny Fampandrenesana Android N, Fiarovana Marshmallow sy kinova N, Android Wear ary Google Play vaovao ho an'ny mpamorona. Azontsika atao bebe kokoa ny mahazo hevitra momba ny sasany amin'ireo teny izay hivoaka avy any Sundar Pichai amin'ny teny ifotony.
Anisan'ireo fivoriana rehetra ireo azontsika atao ny mamintina ny sasany amin'ireo tsy ampoizina homena ao amin'ny Tetikasa Tango, Ka tsy hafahafa ny mieritreritra fa misy fitaovana na prototypa azo aseho izay afaka mametraka antsika amin'ny làlana mankamin'ity hevitra vaovao ataon'ny ekipa Google ity. Andro vitsivitsy ary hamela fisalasalana momba ny Google vaovao isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Nampiana session vaovao amin'ny Google I / O 2016
Google Play dia hamela handray anjara amin'ny programa beta hanandramana ireo fampiharana Android
Clash Royale dia hahazo fanovana mandanjalanja amin'ny 18 Mey